corona virus – Healthy Life Journal
(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်၏ သုံးသပ်ချက်) မေး. နိုင်ငံအများစုမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲဆိုတာကို လူတွေက အမေးများနေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့ထင်မြင်ချက်လေးကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. ဆရာ့အနေနဲ့ ပြောနိုင်တာကတော့...
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေး ဂျက်မားက ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကျော် လှူဒါန်း
အလီဘာဘာတည်ထောင်သူနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးဖြစ်တဲ့ ဂျက်မားက ဝူဟန်ကော် ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ရှာတွေ့နိုင်ရန် သူ့ဖောင်ဒေးရှင်းမှ တဆင့် ယွမ် သန်း ၁၀ဝ (အမေရိကန် ဒေါ် လာ ၁၄ ဒသမ ၄ သန်း)ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်မားက...
၈၆နှစ်အရွယ် ဝှီးချဲနဲ့ သွားလာနေရတဲ့ ဆရာဝန်က ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူကလေးများကို ကယ်တင်ရန် ဆေးရုံပြန်ရောက်လာ
ဝှီးချဲနဲ့ သွားလာနေရတဲ့ ၈၆ နှစ်အရွယ် အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ ပါမောက္ခဒေါင်က ဝူဟန် ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Outbreak ကြောင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါခံစားနေရသူတွေကို ဆေးကုသမှုပေးဖို့ ဆေးရုံကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပါမောက္ခဒေါင်ဟာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့် သူ နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝူဟန်ကလေးဆေးရုံကို...
တရုတ်တွင် ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများကို HIVဆေးများသုံးပြီး ကုသမှုပေးနေ
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါခံစားနေရခြင်းအတွက် HIVဆေးများကို သုံးပြီး ကုသမှုပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။Lopinavir နဲ့ Ritonavir ပေါင်းစပ်ကုထုံးက ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူလူနာများအ တွက် နောက်ဆုံးကုထုံးဟု တရုတ်အမျိုးသားကျန်း မာရေးကော်မရှင်(NHC) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် လူဦးရေ ၂၀ဝ၀ ကျော် ဖျားနာခဲ့ပြီး...